Ogaden News Agency (ONA) – Xaflad Lagu Maamuusayay 31 Guuradii JWXO oo Lagu Qabtay Magalada Perth ee Dalka Australia.
Posted by ONA Admin	/ September 27, 2015
Waxaa maalintii shalay ahayd ooy taariikhdu ku beegnayd 26/09/2015 lagu qabtay Magaalada Perth ee Galbeedka Australia xaflad aad u balaadhan oo lagu maamuusayay 31 guuradii kasoo wareegtay aas aaskii Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO). Xafladan waxaa kasoo qayb galay dad aad ufaro badan kana kala socday bulshada qaybaheeda kala duwan ee kudhaqan magaalada Perth. Waxaa shirkan goob joog ka ahaa taageerayaasha Somaaliyeed, xubno kasocda Jaaliyada Oromia, iyo xubno kasocda Jaaliyada Khaatumo State of Somalia.
Xafladu waxay ku bilaabmatay jawi aad uqurux badan waxaana ugu horayn makarafoonka lawareegay halgame Kaldeeq Muuse oo xidhiidhiye ka ahaa xafladan. Soo dhawayn iyo salaan kadib wuxuu halgame Kaldeeq kacodsaday Sheekh Cabdiqaadir Cali inuu aayado Quraan ah kufuro xaflada. Sheekh Cabdiqaadir wuxuu goobta xafalada kasoo jeediyay wacdi aad u dheer una qiimo badan.
Wacdigaa qiimaha badan leh kadib waxaa loo istaagay heestii calanka Ogadenia. Intaa dabadeed waxaa ka hadlay madasha Gudoomiyaha Jaaliyada Somaalida Ogadenia ee Galbeedka Australia, Halgame Asad Cumar. Salaam diiran kadib wuxuu gudoomiyuhu umahad celiyay xubnaha Jaliyada iyo taageerayaasha kasoo qayb galay xafladan.
Waxaa khudbad aad udheer meelo badana taabanaysa kasoo jeediyay xafladan Naftii hure Nuur Faatule oo kahadlay Taariikhda Halganka Ogadenia, marxaladaha uu halganku soomaray iyo heerka uu hada taaganyahay. Wuxuu Naftiihure Nuur aad ugu dheeraaday waxa uu Gumaysigu ka damacsanyahay guud ahaan ummada Somaaliyeed gaar ahaana Somaalida Ogadenia. Qudbadaa Naftiihuraha kadib waxaa isna gabay halgameed aad uqiiro badan kasoo jeediyay goobta abwaan Maxamed Gaboose oo kamid ah odayaasha ugu firfircoon Jaaliyada Perth.
Waxaa isna goobta ka hadlay Garaad Cabdullaahi oo ah oday Somaaliyeed kuna dhaqan magaalada Perth. Wuxuu garaadku sheegay in taageerida halganka iyo midnimada Somaaliyeed ay muqadas tahay. Waxaa isaguna soo bandhigay presentation kusaabsan Arimaha Xuquuqul Insaanka, Xoghayaha guud ee OYSU Pacific Mudane Yaxye. Wuxuu mudane Yaxye aad uga hadlay shaacana ka qaaday nolosha ay ku noolyihiin umada dulman ee Somaalida Ogadenia eey Ethiopia marwalba isku daydo inay qariso.
Intaa kadib, waxaa siwada jir ah usoo bandhigeen dhalinyarada OYSU iyo xubno katirsan jaaliyada, dhaantooyin iyo heeso halgameed. Gabagabadii iyo gunaanadkii shirka waxaa goobta lakeenay Cake loogu talagalay xaflada 31 guurada kasoo wareegtay aas aaskii JWXO, waxaana lagu sharfay inuu keega jaro gudoomiyaha Jaaliyada khaatumo State ee magaalada Perth. Xaflada ayaa kusoo gabagabawday farxad iyo jawi aad uquruxbadan.
ONA / Perth